Zuva: Ndira 12, 2020
Mutevedzeri weGurukota rezvekutakurwa Adil Karaismailoğlu ari paMarmaray
Pasi pehutongi hweMutevedzeri weGurukota rezvekutakura nekuvakwa kwezvinhu Adil Karaismailoğlu, pa 11.01.2020, TCDD General Manager Ali İhsan Uygun, TCDD Transportation General Manager Kamuran Yazıcı, Wezvivakwa Investment General Manager Yalçın Eyigün [More ...]
Gurukota Turhan: 'Channel Istanbul chirongwa cheRent'
Cahit Turhan, Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvirimwa, uye vachitaura pane imwe nhepfenyuro yeTV kuti vachaita chirongwa cheKanal Istanbul uye vatumire invoice kuIMM. Isu tiri mukukwanisika kwemabasa edu [More ...]
Eskişehir Anoda Kuti Ive neinzwi muRail Systems iine 'Collaboration Model'
Pamusangano weRail Systems Cluster (RSC) wakaitirwa muEskişehir Organised Industrial Zone (EOSB), pfungwa dzakachinjaniswa kuti dzive neyokutanga modhi yekubatana adına kuitira kuti awane izwi rakawanda muchikamu ichi. Rail Systems Kusanganisa (RSC) [More ...]
Kutaura kuti iyo organic mutoro iri kuuya kuMarmara Gungwa ichave nemhedzisiro nekuvaka kweChannel Istanbul. Dr. Cemal Saydam akataura kuti kunhuhwirira kwakafanana neiyo iri mune yeGoridhe Horn kunobuda. Rakarongedzwa neIstanbul Metropolitan Municipality (IMM) “Kanal Istanbul [More ...]
Minister Turhan, mukutaura kwavo pamusangano wekutungamira wegubhu nehurongwa hwekushambadzira hwepamberi hwakagadzirwa naSanmar Shipyard, akataura kuti pane chiitiko chechikepe chakapotsa chakambomira muTuzla. [More ...]
Mutungamiri weCHP Kemal Kılıçdaroğlu, Istanbul Metropolitan Municipality muhurukuro yake yakarongedzwa neIstanbul Channel, Istanbul TUBITAK'ın Channel Istanbul, vachitaura nezve mushumo wakawanikwa. 'Kunyangwe iwe uchida kana kwete uchaitwa muIstanbul Channel' Mutungamiriri [More ...]
Nhasi muNhoroondo: 12 Ndira 1920 Haydarpaşa-Baghdad njanji
Nhasi Munhoroondo Yenhoroondo 12 January 1920 Mushure mekunge mabritish akatora British Haydarpasa-Baghdad, Haydarpaşa-Konya neKonya-Baghdad vakaungana pasi pevatungamiri vaviri. Zviteshi zvekutakura uye kutumira mapurisa zvakaiswa panzvimbo huru.